မိုင်၁၈၀၀ ခရီးစဉ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » မိုင်၁၈၀၀ ခရီးစဉ်
Posted by kai on Jul 9, 2013 in Editor's Notes, Local Guides, Photography | 47 comments
ဇူလိုင်၎ရက်နေ့မနက်ထွက်.. ၇ရက်နေ့ညပြန်ရောက်တဲ့ မိုင်၁၈၀၀ကျော်ကားမောင်းခရီးစဉ်ပါ…။ဓါတ်ပုံ၇၀၀ကျော်ရိုက်ခဲ့တာမှာ ပုံတချို့ရွေးတင်ရင်း စလိုက်မယ်လို့…
ဖရီးဝေး နံပါတ် ၅ပေါ်က အသားစားနွားခြံ
အမေရိကလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ Red Woods တောထဲကရွာကလေးရဲ့ လမ်းဘေးကမီးပန်းဖေါက်ပွဲ
BLAIR WITCH က ညရှုခင်းတွေ ဓာတ်သေရိုက် တင်ပေးပါလားဟင်…
မိသားစုတော့ ခေါ်မသွားပါနဲ့၊ သဂျီး တစ်ယောက်ထဲသွား အားဟိ
စ တင်ကတည်းက နွားခြံနဲ့ စတာပဲ
ဒီတစ်ခါ မိုင် ၁၈၀၀ က အဆုံးတော့ သတ်မှာပါနော်
အယ်လ်အေကဆန်ဖရန်ကို နံပါတ်၅ဖရီးဝေးကတက်ရင်.. အဲဒီနွားခြံတွေဖြတ်ရတယ်..။
ဆိုတော့.. မြန်မာလူမျိုးများ အမဲသားစားကြ..။
ဒါဆို မြန်မာပြည်က နွားတွေ ဘယ်လောက်အဖိုးတန်တယ်ဆိုတာ သိလောက်ပြီ။
ဒါ့ထက် လယ်ပါထွန်ပြီး ရုန်းကန်ရလို့ ပိုတောင် တန်ဖိုးရှိအုံးမယ် ထင်တယ်။
ဒီတစ်ခေါက် မိုင်၁၈၀၀က စာမပါဘူးလား။
ဟို…ကားမောင်း ၀င်လို့ ရတဲ့သစ်ပင်ထဲ…
ချစ်သုဝေ နဲ့ .. ခဏ ဖြတ်လျှောက်ချင်လိုက်တာ….
ပုံတွေက သေး၊ ကိုယ်တိုင်က မျက်လုံးမကောင်းတော့ ကြည့်ရတာ အားမရ။
စတော်ဗယ်ရီရယ်.. ချယ်ရီရယ်ကို အဲဒီနားကလယ်သမားတွေစိုက်ပြီး.. ကွင်းပြင်စပ်တင်တဲထိုးရောင်းကြတာ..။
မြို့ထဲထက်.. ၃ဆလောက်ဈေးသက်သာတယ်..။ တခါထဲစားလို့ရအောင်.. ရေဆေးဖို့နေရာလေးပါပေးထားတယ်..။
မသိဘူး။ အဲဒီဘက်ကပုံတွေ ငမ်းချင်
ယူအက်စ်ကို တောင်မြောက်-အရှေ့အနောက် ဖရီးဝေးကားလမ်းကြီးတွေ ကွန်ယက်လို ဆောက်ထားတာမို့.. သာမန်အားဖြင့် ပြည်နယ်တွေတခုနဲ့တခု လမ်းတောက်လျှောက်ပေါက်ပါတယ်..။
အလစကာကတော့.. ကြားထဲကနေဒါခံနေလို့.. မသိ..။
မြန်မာပြည် ဖယ်ဒရယ်ပုံစံလုပ်မယ်ဆို အတုခိုးသင့်တယ်…။
ပုံ ၇၀၀ ကျော်ဆို မနည်းဖူးရယ် …
အခုဟာက ၁၁ပုံဘဲ မြင်ရတာ ဒိထက် ပိုတင်ပေးစေချင် …
အနော်တို့ အတွက် အသစ်အဆန်းမို့ ပါဗျာ …
အမေရိကားတော့ မသေခင် တခေါက် ရောက်အောင် လာဦးမယ် ….. ။
သဂျီးလဲ မသေခင် တောင်ပြုံးပွဲ တခေါက်လောက်တော့ ရောက်အောင် လာခဲ့ပါဦး ….
သများတို့နဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့ …. ။
အခုသွားတဲ့ခရီးက. ယူအက်စ်မှာရှိတဲ့.. မြန်မာတွေတောင် တော်တော်ရောက်ခဲမယ်..။
ကမ္ဘာတန်းပရိုမိုးရှင်းလုပ်လိုက်ရင်… တောင်ပြုန်းက ကမ္ဘာ့ဂေးမြို့တော်တောင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားမှာ…
သဂျီးရေ … ဒီတခေါက် မြန်မာပြည် ပြန်လာရင် ..
အလောင်းတော် ကဿပနဲ့ တဆက်တည်း ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်းကို လေ့လာစေချင်တယ်ဗျာ
အဲ့ မှာလဲ … ယူအက်စ်က အပင်ကြီးတွေ နီးနီး သစ်ပင်ကြီးတွေ ရှိသဗျ သက်တမ်းတော့ မသိ
နောက်ပီး ဆရာကြီးဒေါက်တာသန်းထွန်း သိပ်ရှာချင်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဖြစ်နိူင်ဖွယ် ခေါင်းလောင်းကြီးလဲ ကံကောင်းရင် တွေ့မယ်ထင်တယ်
မထင်နဲ့သူကြီးရ တောင်ပြုံးမှာ က အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး။
ကျိတ်ဝိုင်းလို့ပေးတဲ့ နတ်ကနားကမှ တကယ်ရှယ်တွေ တွေ့ရမှာ
လမ်းမှာ အင်ဂျင်ဝိုင် ၊ ဘရိတ်ဆီ ၊ ဂီယာဝိုင် ဘယ်နှခါ လဲ ခဲ့လဲဗျ
မိတ်ဆွေတယောက်ကားနဲ့သွားတာပါ…။ ၂၀၁၂မိုဒယ် Toyota Sienna ပါ…။
အင်ဂျင်ဝိုင် ၊ ဘရိတ်ဆီ ၊ ဂီယာဝိုင် လှည့်ကြည့်စရာတောင်မလိုပါဘူး…
” လမ်းမှာ အင်ဂျင်ဝိုင် ၊ ဘရိတ်ဆီ ၊ ဂီယာဝိုင် ဘယ်နှခါ လဲ ခဲ့လဲဗျ ”
” အင်ဂျင်ဝိုင် ၊ ဘရိတ်ဆီ ၊ ဂီယာဝိုင် လှည့်ကြည့်စရာတောင်မလိုပါဘူး ”
အဘ တို့ သြဇီက ကားလည်း ၊ ၂၀၀၉ ဒီဇင်ဘာ ကတည်းက ဝယ်ထားတာပါ ။
ဒီ ၃ / ၄ နှစ် အတွင်းမှာ ၊ အင်ဂျင်ဝိုင် ၊ ဘရိတ်ဆီ ၊ ဂီယာဝိုင် စစ်ဖို့ ၊ လဲဖို့ မ ပြောနှင့် ။
ကား စက်ဖုံး / ဘောနက်ဖုံး တောင် မြင်ဘူးတယ် ရှိအောင် ၁ ခါ ၂ ခါ လောက်ပဲ ဖွင့်ကြည့်ဖူးတယ် ။
ပြောရမယ် ဆိုရင် ၊ ကားထဲ ဓါတ်ဆီ က လွဲပြီး ဘာမှ မထည့်ဘူးဘူး ၊ မလဲ ဘူးဘူး ၊ မစစ် ဘူးဘူး ။
ကား ကုမ္ပဏီ က ညွှန်ကြားထားတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ Service Center ကို ပို့ပေးတယ် ၊ ဒါဘဲ ။
( ၆ လ တစ်ခါလောက်တော့ Service Center ကိုပို့လေ့ ရှိတယ် )
ကား က လည်း ၊ ဘာမှ ပြဿနာ မဖြစ်ဖူးဘူး ၊ ဘီး တောင် မပေါက် ဖူးဘူး ။
မြန်မာပြည် မှာ ဘာလို့ ကားကို ခဏ ခဏ စစ်/လဲ နေကြသလဲ မသိဘူး ။
အဘဖော ပြောသလိုဆို မြန်မာမှာ တစ်ခုခုတော့ လွဲနေသလိုဘဲ၊ ဘရိတ်ဆီ ဂီယာဝိုင် ကတော့ လဲရခဲပါတယ် နှစ်ပေါက်အောင်သုံးကြပေမယ် အင်ဂျင်ဝိုင်တော့ ၂~၃ လ လောက်ဆိုလဲကြတယ်၊ အင်ဂျင်ဝိုင် အရည်အသွေးဘဲကွာတာလား ဘာလားတော့ မသိဘူးဗျာ၊ ၀ပ်ရှော့ကလဲဆို လဲကြတာဘဲလေ။ ဒါကြောင့် Car Service Center တွေဒီနိုင်ငံမှာ လာရောက်ပြီး တိုက်ရိုက်ခွဲတွေ ဖွင့်မယ်ဆိုတာကို အတော်များများမျှော်လင့်နေကြ တာပါဘဲဗျာ။
အဲဒီ ကားမောင်းပြီး ဖြတ်လို့ ရတဲ့ အပင်ကြီးကို စိတ်ဝင်စားတယ်။
အမေဂျီးကားက အိမ်တွေကို အဲဒီ Redwood နဲ့ ဆောက်တာလား။
ယူအက်စ်မှာ နာမယ်ကြီးတာ.. ၂မျိုးတဲ့… Redwoods နဲ့ Sequoias
နှစ်သက်တမ်းထောင်ချီတဲ့.. ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး.. အကြီးဆုံးသစ်ပင်ကြီးအမျိုးတွေပါ..။
အမှတ်မမှားရင်.. Guinness World Records ထဲပါတယ်..။ ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ထဲပါတယ်..
ကားမောင်းပြီး ဖြတ်လို့ ရတဲ့ အပင်ကြီးက ရက်ဒ်ဝုဒ်..
အဲဒီအပင်တွေ အမျိုးသားသစ်တောထဲထိမ်းသိမ်းထားတာပါ. ၂မျိုးလုံးရဲ့သစ်တောကြီးတွေက.. ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတယ်..။
အမှတ်တရ..ရက်ဒ်ဝုဒ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့.. တမိုက်လောက် ဂျီးဇက်ခရော့စ်လေးဝယ်တာ.. ၁၀ဒေါ်လာကျော်တျော်ပေးလိုက်ရတယ်..
About Redwoods and Sequoias
” Giant Sequoias
Bark grows up to3feet thick ”
Bark သစ်ခေါက်တောင် ၃ ပေ ထူတယ်နော် ။
အဘ ရဲ့ သြဇီ ခြံထဲက အပင် တစ်ပင်က နှစ်တိုင်း အခွံ ကွာ/လဲ တယ်ကွယ် ။
ခြံထဲမှာ အမှိုက် ပွတာပေါ့ကွယ် ။
၃ ပေ ထူတဲ့ သစ်ခေါက်သာ အခွံ ကွာ/လဲ လို့ကတော့ ၊
ခြံရှင်းရမယ့်သူ ၊ သေပြီ ဆရာပဲ ။
အော် သူကြီး၊ သူကြီး ….
ပုံတွေ ကြီးနေရင် အချီးမွမ်းခံရ မှာစိုးလို့ ထင်ရဲ့။
ဒါတောင် ၇၀၀ ကျော်ထဲမှာ အများစု မဲမဲမှောင် ပုံတွေ ချည်းများလား ???
၁၂နာရီလောက်ကားမောင်းသွားတာ.. မီးပန်းဖောက်တဲ့..တောထဲကရွာထဲ ရောက်တော့.. ည ၉နာရီခွဲလောက်ဖြစ်နေပြီ..
အဲဒီမြောက်ဖက်က.. ည ၉နာရီလောက်မှနေ၀င်တာ…။
အိုင်အက်စ်အို တင်ရိုက် ဖလက်ရ်ှဖွင့်ရိုက်တော့ တရားဆွဲမှာမို့လား..
မဲမဲမဲမဲနဲ့ ဒီအက်စ်အယ်လ်အာရ် ကိုင်ပီး လက်က မတက်မတက်နိုင်ဘု
နောက်မှကိုင်တဲ့ မယ်ပု က သဂျီးထက် အပုံယီးသာဒယ်…
ISO တင်ရင်းတင်ရင်း.. ၂၅၀၀တောင်ဖြစ်နေပြီ…
M ထားရိုက်တာဆိုတော့… ဟိုလိုရိုက်လိုက်…မှောင်လိုက်…
sunny day of 11 တို့ (ဟိုဆြာတွေကတော့ sunny day of 16 တဲ့)
အဲ့ဒါတွေ ခနခေါက်ထားလိုက်.. လိုအပ်ရင် အပယ်ကျောက် နဲ့ သာဆော်..
ကျော်ဆို f/2.8 နဲ့တောင် လန်စကိတ်ရိုက်သေးတာ..
တကယ်တော့ focal plane ဆိုတာက …
အကောင်းပြောပါ့မယ်. ပုံတွေတွေ under exposure တွေဆိုတော့ photoshop ထဲသွားပြီး exposure +1 နဲ့ တပုံ သိမ်း(normal)
Exposure +2 နဲ့ တပုံ သိမ်း (over exposure)
ပြီးရင် သုံးပုံပြန်ပေါင်းပြီး HDR လုပ်တဲ့အခါ
လင်လင်းးဝင်းဝင်း ဖြော်တကစ် သွားတာပေါ့ကွီ.
ယူတုမှာ ကိုယ့်ထမင်းကိ်ုယ်စားပီး HDR Processing သင်ပေးတဲ့
လူတေများ တပုံယီး. ကို
အနော့်အထင် ပုံတွေမှာ DSC ဆိုတာ ပါနေတော့ Compact နဲ့ ရိုက်တယ်ထင်တာဘဲ
နိုက်ကွန်းတွေရဲ့ default file naming system ပါဗျာ..။
စဂါးမစပ် ကျုပ် အခု ပက်ဆံ စုနေဒယ်…ပြည့်ရင် ၇၀-၂၀၀ မမ ငိငိ..
လက်နက်ကြီး တပ်ဆင်မလို့ …။ ၀ိုက်ရတာ နည်းနည်း အီလာဘီ ။
စိုင်ပြန်ပစ်တော့မယ်… ဒချိ.. ဒချိ..။
D5100 ကို တမလွန်လင်န်းစ် ၁၈-၂၇၀ တပ်ရိုက်နေတာပါ…။
ရိုက်ချက်ကို .. အခုထိ.. မသုံးတတ်သေးတော့.. လည်နေတုံး..
” အနော့်အထင် ပုံတွေမှာ DSC ဆိုတာ ပါနေတော့
Compact နဲ့ ရိုက်တယ်ထင်တာဘဲ ”
ဟင် ၊ အဲဒါတော့ ဟုတ်ဘူး ထင်တယ် ။
အဘ ရဲ့ Nikon D-5100 နှင့် ရိုက်ရင်လည်း ၊
ပုံတွေက DSC နှင့် စတာပဲ ။
Nikon D-5100 က Compact မဟုတ်ဘူး ၊
DSLR လို့တော့ ထင်တာပဲ ။
” ဒီအက်စ်အယ်လ်အာရ် ကိုင်ပီး လက်က မတက် မတက်နိုင်ဘု
နောက်မှ ကိုင်တဲ့ မယ်ပု က သဂျီးထက် အပုံယီး သာဒယ် ”
ဟား ဟား ဟား ။ ဆော်ပဟ ။
ငါလဲ DSLR ကိုင်မိနေတော့ ဆင်ခြင်မှပဲ ။
သူကြီး ကလည်း သူကြီး ပဲ ။
မဲ နေရင်လည်း ၊ ပုံမတင်ခင် နဲနဲ ပြင်ခဲ့လိုက်ရောပေါ့ ။
မိုင်၁၈၀၀ ကို ၄ရက်မောင်း
တနာရီ မိုင် ၈၀ဆို.. ၁၀နာရီမောင်းရင်.. မိုင်၇၀၀ (ထရဖစ်မရှိရင်) အသာလေးရောက်တယ်လေ… အန်ကယ်ကြီးရယ်..။
လူဆိုတာ.. တယ်… သေးငယ်ပြီး.. နုနယ်ပါလား.. တခါထဲသံဝေဂရမိလေရဲ့…
Welcome to the Tallest Trees in the World
You have discovered the legendary California redwoods. At least once in your lifetime, you need to visit the magnificent coastal
redwoods of Humboldt County—to walk, explore and soak up the silence and grandeur of forests unlike any others in the world. Whether your tastes run to scenic drives or hiking trails, you’ll find plenty of choices in Redwood National & State Parks in the north county, or along the Avenue of the Giants and Humboldt Redwoods State Park in south county. These two jewels adornacrown studded with many other parks, forests, preserves and beaches, making Humboldt Countyaparadise for nature lovers and outdoor recreation. Fishing, kayaking, biking, rafting, backpacking, birding and more are all pursued avidly on the Redwood Coast. Within this splendid natural setting, visitors also discoverarich history and vibrant culture. Picturesque farming towns and fishing villages have changed little over the years, yet provide amazing culinary, wine and craft beer experiences as well asatreasure trove of local arts and entertainment.
သာမီးဂါဒေါ်လေး ခေါ်အသွားဗူးလား… ဒီလိုမှန်းသိ ဦးခိုမ်မရှိတုံး အိမ်လည်လာပါဒယ်…. လမ်း တည်းခိုခန်း ညအိပ်ဇာတ်လမ်းလေး ရှိရင် လုပ်ပါအုံး… သာဂျီးစွံမှန်း သိပီးသားပါ…
ကျုပ်တို့ဆီက ပြုန်းသွားတဲ့ ရိုးမတောကြီးတွေကိုလွမ်းမိသွားတယ်..
အဖေတပ်ထဲနေစဉ်တုန်းက မုဆိုးလည်းလုပ်တော့ တောလယ်လိုက်ဖူးတယ်…
မိုင် 1800 တောတစ်နေရာက သစ်ပင်ကြီးတွေကိုကြည့်ပြီး
အပိုင်း2ကျရင် ပုံဆိုဒ်လေးတွေ နဲနဲ ကြီးပေးပါနော်…
ဘာလို့ Immortal Tree လို့ခေါ်တာလဲဟင်.. သစ်ပင်လဲ သေတာပဲမဟုတ်လား….
မိုးကြိုးကျ မီးလောင်.. ရေနစ်.. သစ်ခုတ်သမားခုတ်… စတာတွေနဲ့မသေတဲ့အပြင်… အမြစ်ကနေ နောက်အပင်သစ်ကလေးတပင်ထပ်ထွက်လာလို့ပြောတာတဲ့..။
.. နှစ်၁၀၀၀ ဗိန္ဓောဆေးဖေါ်လိုက်ရရင်တော့.. တော်တော်ရောင်းကောင်းမယ်..။
ရွာထဲက အမြစ်တူးတတ်တဲ့ သူတွေနဲ့တွေ့ရင် ဒီအပင်မလွယ်…
အောက်ဆုံးက သစ်ပင်ဂျီးကို မျင်ဘူးဒယ် ..
အိပ်မက်ထဲမှာနဲ့ တူဒယ် ..
အိုက်လို သစ်ပင်ဂျီးထဲမှာဘဲ စားသောက်ဆိုင် ဖွင့်ထားဒါလည်း ချိဒေးဒယ် ..
ဒါလည်း ဘယ်မှာမှန်းဒေါ့ သိဒတ်ဝူးးး
သဂျီးရေ ကျုပ်လည်းမိုင်၁၈၀၀ လောက်ပါတ်ပြေးလိုက်ရတယ် လိုက်တဲ့သူတွေအမောဆို့သွားလို့
ငါမသေသေးဘူး ငါမသေသေးဘူး ငါ့လက်တွေ စာရေးနိုင်သေးသရွေ့ပေါ့
” သဂျီးရေ ကျုပ်လည်း မိုင် ၁၈၀၀ လောက် ပါတ်ပြေးလိုက်ရတယ် ”
စိတ် မကောင်း ပါဘူး ၊ ကို DEPARKO ရယ် ။
Gazette ကို ပြန်လာတဲ့ သံယောဇဉ် ကိုမြင်မိပါတယ် ။
လှိုက်လှိုက် လဲလဲ ၊ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ ။
same to you ပါ
ကိုယ့်အချစ်က နယူးဂျစီပြည်နယ်က သက်တမ်းနှစ်လေးထောင်ရှိတဲ့
သစ်ပင်ကြီးလိုခိုင်မာပါတယ်အချစ်ရယ် ဆိုပြီး ဘယ်ကောင်လည်းတော့သိဘူး
ဒီသစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ အဲ့သည်ကောင်ရည်းစားစာ ဘယ်လိုပတ်သက်သလဲတော့မသိ